Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (I) | Site na Linux
Pikico | | GNU / Linux, Netwọk / Sava
Anyị malitere usoro nke ihe gbasara Olee otú iji wụnye na hazi a Master Primary DNS na Cache na Debian Squeeze?, nke anyị bu n'obi iji nye a Ntinye ntinye na ụwa na-adọrọ mmasị nke ọrụ a dị mkpa maka ọrụ nke Network of Networks that Internet.
Edere edemede niile ka enwere ike iji ha mee ihe n'usoro. Na Nke mbu y 2da akụkụ nwere opekempe usoro iwu dị mkpa maka New ma ọ bụ Newbie nwere ike ịghọta na ịzụlite nwụnye nke a DNS.
Anyị na-akwado ha ka ha ghara ịtụ ụjọ. Gụọ ma tinye ihe edere ede na ị ga - enweta ezigbo nsonaazụ. Na ndị a na-enyo enyo na-adabaghị na ndakpọ olileanya, anyị na-akwado ịdị jụụ, dị jụụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịghọta otu esi ahazi ọrụ a dị mkpa.
Gbaghara m ka m jiri okwu bekee na Anglicism oge ụfọdụ. Emere ya iji nweta nghọta doro anya na ederede.
Akụkụ ndị anyị ga-emepe na Nkebi nke Mbụ bụ ihe ndị a:
Nkọwa bara uru
Ntọala DNS kachasị
Mpaghara na ndekọ
Oge ngafe mpaghara
2 Nkọwa bara uru
3 Ntọala DNS kachasị
4 Mpaghara na ndekọ
5 Mpaghara mmebi ma ọ bụ oge njedebe
Ha na-ekwu na WWW Village na DNS bụ otu n'ime ebe gbara ọchịchịrị nke ọrụ ntanetị. N'ụzọ dị mma, nke a abụghị ikpe - karịsịa maka LAN - dịka anyị ga-egosipụta site na isiokwu ndị na-esonụ. Dị ka mmadụ achọghị ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ka ị gụọ obere akụkụ ederede.
Nkọwa dịka Wikipedia:
El DNS bụ nchekwa data ekesara na hierarchical na-echekwa ozi metụtara na ngalaba aha na netwọkụ dị ka ịntanetị. Ọ bụ ezie na dịka nchekwa data nke DNS nwere ike ijikọ ụdị ozi dị iche iche na aha ọ bụla, ihe ndị a na-ahụkarị bụ ọrụ nke ngalaba aha na adreesị IP na ọnọdụ nke sava email nke ngalaba ọ bụla.
Kpọ adreesị IP bụ n'ezie njirimara a maara nke ọma nke usoro DNS. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na adreesị IP nke saịtị prox.mx FTP bụ 200.64.128.4, ọtụtụ mmadụ na-erute igwe a site na ịkọwapụta ftp.prox.mx na ọ bụghị adreesị IP. Na mgbakwunye na ịdị mfe icheta, aha a pụrụ ịtụkwasị obi karị. Adreesị ọnụọgụ nwere ike ịgbanwe maka ọtụtụ ebumnuche, na-enweghị ịgbanwe aha.
Na mbu, amụrụ DNS site na mkpa ọ dị icheta aha sava niile ejikọrọ na Internetntanetị. Na mbụ, SRI (nke bụ SRI International) kwadoro faịlụ a na - akpọ HOSTS nke nwere aha ngalaba niile amaara ama (nke ọma, faịlụ a dị, yana ọtụtụ sistemụ arụmọrụ ugbu a nwere ike ahazi iji lelee faịlụ ndị ọbịa gị). Ọgba aghara nke netwọk mere ka usoro ahapụta ahaziri ahazi na faịlụ ndị agha enweghị isi yana 1983, Paul Mockapetris bipụtara RFCs 882 na 883 na-akọwapụta ihe taa gbanwere na DNS nke oge a. (RFC ndị a emeela ka ọ ghara ịba uru site na mbipụta 1987 nke RFCs 1034 na 1035).
A na-akpọ kọmputa ndị ọrụ a na-agba "Aha sava". Debian na-eweta na nchekwa ya ọtụtụ mmemme iji nwee arụ ọrụ DNS yana n'etiti ha bụ nke a na-ejikarị na Internetntanetị: Edozi o "Berkley Ntanetị Aha Ntanetị".
EKERE bụ de facto ọkọlọtọ dị ka ihe nkesa DNS. Ọ bụ Software efu ma kesaa ya na ọtụtụ nyiwe UNIX na Linux. Ha na-ezo aka na-ekekọta “aha ya bụ”(Aha ya bụ daemon). Can nwere ike ịchọta ebe a (Wikipedia na bekee) atụnyere ụdị sava DNS dị iche iche.
NetBIOS: Usoro Nrụpụta Ihe Nrụpụta / Nweta (NetBIOS): Ntọala ntanetị na usoro mmepụta (NetBIOS). Ngwa mmemme mmemme (API) nke mmemme nwere ike iji na netwọk mpaghara (LAN).
NetBIOS na-enye mmemme nwere otu iwu dị iche iche iji rịọ maka ọrụ dị larịị dị mkpa iji jikwaa aha, usoro izizi, na izipudatagrams”N'etiti ọnụ na netwọk.
Aha NetBIOS: 16-bit aha nke usoro nke na-eji ntinye ntanetị na usoro ntanye (NetBIOS). Aha nke WINS Microsoft (Windows Internet Aha Sistemụ) nke Microsoft ghọtara, nke jikọtara ma ọ bụ "eserese" kọmputa ma ọ bụ aha nnabata na otu adreesị IP.
FQDN: "Ezigbo aha ngalaba aha" o Ofụri Esịt Ruru Eru ngalaba Aha. Dika ịsụgharị aha ndị e kere na teknụzụ bekee na-adịkarị oke, ana m akwado ka ị mụta aha ahụ n'asụsụ Bekee yana maka ebumnuche bara uru na-ezo aka na ya dị ka FQDN. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa DNS ngalaba Aha nke edobere iji gosipụta ọnọdụ zuru oke ya na ngalaba aha ngalaba aha.
Ma imegide ikwu aha, a FQDN ọ na-ebule oge iji gosi ọnọdụ ya na mgbọrọgwụ nke aha aha. Ihe Nlereanya: freake.amigos.cu. ọ bụ ya FQDN site n'aka onye nnabata nke aha NetBIOS bụ freake ma bụrụ nke amigos.cu ngalaba.
Inyi.cu. freake.amigos.cu. otrofreake.amigos.cu. mail.amigos.cu.
Anyị nwere ike ịhazi DNS ma ọ bụ Ngalaba Aha Server n'ụzọ dị iche iche iji nye ọrụ dị iche iche. Ihe eji eme ihe bu:
Ihe nchekwa ihe ("Ndepụta aha"): Arịrịọ ma ọ bụ arịrịọ emere na ihe nkesa ga-edozi site na ndị na-ebugharị anyị na-ekwupụta na nhazi gị. A ga-echekwa nzaghachi ma "cheta" maka mgbe a na-ajụkwa Cache Server ọzọ, nke na-eme ka ọsọ nzaghachi dị ukwuu.
Onye Isi Nkuzi ("Isi Master"): Arịrịọ ma ọ bụ arịrịọ emere na sava ahụ ga-edozi site na ịgụ data echekwara na faịlụ mpaghara nke Mpaghara emepụtara. Dị ka aha ya na-egosi, ọ ga-abụ Onye Njikere Aha Aha Ikike maka mpaghara a na-enyocha.
Secondary Onye Ozizi ("Secondary Master"): Arịrịọ ma ọ bụ arịrịọ emere na sava ahụ ga-edozi site na ịjụ ndụmọdụ gaa na Ihe Nlekọta Primary Master maka sava ahụ. Na-echekwa otu ihe dị ugbu a nke Mpaghara Primary.
Anyị nwekwara ike ịhazi ya ka ha rụọ ọtụtụ ọrụ n'otu oge, dị ka ịbụ Primary Master na Caché n'otu oge, nke a na-ahụkarị na netwọkụ azụmahịa anyị.
na Mpaghara bụ ederede ederede doro anya nke na-enye anyị ohere ịhazi Ihe ndekọ DNS. Aha mpaghara ọ bụla dabara na ngalaba aha, ma ọ bụ ọtụtụ adreesị IP dị ka otu ma ọ bụ karịa subnets. O nwere, na mgbakwunye na data ndị ọzọ, dị iche iche Ihe ndekọ nke klaasị ma ọ bụ differentdị dị iche iche, nke anyị ga-ekwupụta naanị ihe ndị a:
SOA: "Mmalite nke ikike". Mmalite nke Ikike. Ọ bụ ndekọ ederede amanyere na mpaghara ọ bụla, naanị otu ga-adị na faịlụ ọ bụla. Ọ bụ okwu mmalite nke faịlụ mpaghara niile. Kọwaa mpaghara ahụ n'onwe ya; nke igwe ma ọ bụ nnabata ọ na-abịa site; onye na-ahụ maka ọdịnaya ya; nke bụ ụdị nke faịlụ mpaghara, yana akụkụ ndị ọzọ gbasara ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke sava DNS. Bụ dị mkpa na n'ime mpaghara faịlụ ọ bụla enwere ndekọ ndekọ A na-egosipụta igwe ma ọ bụ na-anabata ebe ihe nkesa DNS bi.
NS: Maapụ a aha na Aha Server. Ngalaba ọ bụla ga-enwerịrị opekata mpe otu NS. Ihe ndekọ a na-ezo aka na sava DNS nke nwere ike ịza ajụjụ gbasara ngalaba ahụ. Can nwere ike izo aka na onye nkuzi nke Praịmarị ma ọ bụ onye nkuzi nke abụọ.
A: “Adreesị” - (Ntụziaka). Ihe ndekọ a ka eji atụgharị aha nnabata na adreesị IPv4.
AAAA: “Adreesị” - (Ntụziaka). Ihe ndekọ a ka eji atụgharị aha nnabata na adreesị IPv6.
CNAME: "Aha canonical" - (Aha canonical). Ofdị ndekọ site na nke anyị nwere ike inye otu aha ma ọ bụ mepụta ọtụtụ aha utu aha nke. Ka anyị kwuo na anyị nwere ụlọ ọrụ web.amigos.cu. nke anyị etinyela sava weebụ na anyị chọrọ ka ha zoo ya na www.amigos.cu. Mgbe ahụ na Friends.cu Mpaghara anyị ga-enwerịrị ihe ndekọ ndị ọzọ:
web IN A 192.168.10.20 www IN CNAME web.amigos.cu.
MX: "Ozi Mgbanwe" o Ihe nkesa ozi. Ozi nke ndị ozi sava ndị ọzọ jiri mara ebe izipu ozi email nyere adreesị IP. Ihe ndekọ MX ọ bụla nwere ihe dị mkpa, ebe kachasị elu bụ ndekọ na ọnụ ọgụgụ dị ala. Ihe atụ:
Ozi 10.amigos.cu. Ozi 1.amigos.cu.
PTR: Nkewa adreesị IP na aha. Ofdị ihe ndekọ ndị echekwara na ebe a na-akpọ "Mpaghara ntụgharị". Ọmụmaatụ, Mpaghara 10.168.192.in-addr.arpa bụ nke nwere eserese na adreesị niile na adreesị IP na 192.168.10.0/24 IP dị nso
N'ezie ndepụta nke ụdị ndekọ na-aga n'ihu ...
Mpaghara mmebi ma ọ bụ oge njedebe
Mgbe anyị na-eke faịlụ nke DNS ndia mpaghara, anyị ga-hazi ngafe Times na sekọnd. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịkọwapụta ha n'ụzọ dị mkpumkpu dị ka tebụl ndị a:
Anyị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ede faịlụ mpaghara. na FQDN nwere njedebe na a "."(nke ahụ bụ, punto), ma anyị enweghị ike ịhapụ oghere oghere na njedebe nke ahịrị ọ bụla. N'ihi nke ahụ, anyị na-akwado iji ndị editọ njikwa dị ka vi ma ọ bụ nano. Anyị ga-eji nano, nke dị n'echiche anyị dị mfe iji. O doro anya na anyị nwekwara ike iji ndị editọ ederede doro anya na eserese eserese ma ọ bụ GUI.
Enwere m olile anya na ike agwụbeghị gị maka na a ka nwere ntakịrị ntakịrị ịbanye n'okwu ahụ.
Enwere "Backends" ndị ọzọ maka sava DNS dị ka LDAP, MySQL, PostgreSQL, SQLite, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Primary Master DNS maka LAN na Debian 6.0 (I)
Edemede ahụ dị mma ma zuo ezu, enwere m olileanya ịgụ ya n'oge na-adịghị anya.
Zaghachi onye na-ekwu okwu
Ugba 87 dijo
Ọ dị njọ na m na-arụ ọrụ n'ihi na m ga-achọ ịgụ ya nke ọma ...
Na-akpụ akpụ_ dijo
Zaghachi na Creeping_death
Ọ dị mma na ị tinyere isiokwu ndị a ebe a ... ekele maka enyemaka gị Fico 😀
Onye isi ojii dijo
Ọmarịcha! Na-eche akụkụ ndị ọzọ, ihe ndị a nwere "ihe" bara uru, ekele
Zaghachi Mr Black
Edemede mara mma ezigbo enyi m FICO
Zaghachi Julio Cesar
Daalụ niile maka okwu gị .. 🙂
Ndewo, hey, i chere na ị nwere ike ịnye m ụfọdụ ndụmọdụ iji wụnye ọrụ Linux DNs maka netwọkụ m, m ka dị ọhụrụ na nke ahụ ma ha anaghị enye m ụfọdụ ọrụ dịka atụ anya ndị ọrụ m.
Chọpụta ihe dị n’ime faịlụ Thumbs.db ọ bụla ịchọtara
Ederede: Gbanwee GDM Ntọala ma nyochaa Agba Gamma